Awesome Voice Recorder Pro, iri kutengeswa kwenguva shoma | IPhone nhau
Jose Alfocea | | dzakawanda
Isu tinotanga svondo nyowani muActualidad iPhone, iro rekutanga vhiki uye Muvhuro wekutanga wegore idzva 2017, uye ndeipi nzira iri nani yekuzviita pane neyekubhadhara yakakura application iyo mutengo wazvino waderedzwa.
Nhasi tinotaura nezvazvo Awesome Voice sahwira Pro, rekodhi ye iPhone yako uye yako iPad iyo ine yakawanda maficha uye mabasa ayo anoita kuti iwedzere kure ne "Voice Memos" uye kuti iwe unogona kuwana pazasi. Rangarira kuti i yakatemwa nguva yekupa, saka usatambise nguva yako ugoenda nayo muApp Store kana uchifarira nekuti hatigone kuvimbisa kusvika pazvakakodzera.
1 Awesome Voice Recorder Pro, imwe rekodhi yemidziyo yako yese
1.1 Awesome Voice sahwira Pro Main Features uye Mabasa
Awesome Voice Recorder Pro, imwe rekodhi yemidziyo yako yese
Pave nemwedzi mishoma kubva Awesome Voice sahwira Pro yaive yemahara zvachose paApp Store. Panguva iyoyo ini ndaikwanisa kuitora uye, kunyangwe ndisina kuishandisa zvakanyanya, chokwadi ndechekuti chikuru kunyorera kunodarika iko kunoshanda kweApple "Voice Memos" application. Chekutanga pane zvese nekuti inowirirana neiyo iPad, nepo mhinduro yeapuro ichiwanikwa chete kune iyo iPhone. Uye chechipiri, nekuti ine zvakawanda zvakawanda maficha uye mashandiro.
Awesome Voice sahwira Pro, inzwi wezvaiitika musi iPhone wako akawanda mabasa
Awesome Voice Recorder ndiyo yakanyanya kunaka kurekodha izwi, iine chimiro chikuru uye mashandiro akakodzera mahunyanzvi, vatapi venhau, varairidzi, nyanzvi dzekuteerera, mainjiniya ezwi, vashandi vechikoro, vadzidzi vekoreji, uye chero munhu anoda zviyeuchidzo zvezwi.
Zvino, kunyange zvisiri pamutengo wepachena, Awesome Voice sahwira ane 40 dhisikaundi% saka unogona kuiwana ye2,99 euros pane yakajairwa 4,99 euros. Uye nditende, zvakafanira kunyange kana uchingozoishandisa zvishomana.
Nenzira, Awesome Voice sahwira, senge chero rimwe izwi rerekodhi, iri chishandiso chakanakira mamiriro mazhinji uye nyanzviKubva kuvatori venhau kana podcasters kuenda kuvadzidzi vanozokwanisa kurekodha hurukuro, misangano, misangano uye makirasi avo pachavo kuti vazotora zvinyorwa zvavo zvakadzama uye nekujeka.
Main maficha uye mashandiro e Awesome Voice sahwira Pro
Awesome Voice sahwira Pro ndiye inowirirana ne iPhone, iPad uye Apple Watch, uye pakati pezvakakosha maficha uye mabasa atinowana:
Yakasimba faira kugovana uye manejimendi
Dzokorora basa uye unononoka kana kukurumidza kutamba
Chengetedza mafaera ekuteerera
Kubatanidza mafaera ezwi
Yambiro: usakanganwa kuti zvese izvi kukwidziridzwa zviri yakatemwa nguva inopa; Tinogona chete kuvimbisa kuti ndezvechokwadi panguva yekutsikisa ichi posvo, zvisinei, mune yakawanda kwazvo kesi, sezvo vavaki vasingazivise nguva yekutendeseka, hatigone kuziva kuti ichapera riini. Inogona kunge iri mumazuva mashoma, kana mumaawa mashoma, saka kana iwe uchifarira Awesome Voice Yeuka Pro, usatambise imwe yechipiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Awesome Voice Recorder Pro, iri kutengeswa kwenguva shoma
Iwo masheya erombo kana mabhegi erombo kubva kuJapan anoenda pasi munhoroondo